Làlan'ny fampandrosoana - Sichuan Shuer Medical Devices Co, Ltd.
Tamin'ny 2007, orinasa mpanorina voalohany
Shaoxing yeying fanghua co., LTD dia natsangana! Tamin'ny fiandohan'ny fananganana, ny fampandrosoanatrategy dia fampandrosoana tsy miankina sy fananganana marika nasionaly.
Tamin'ny 2010, nirongatra ny ozinina
tamin'ny taona fampandrosoana haingana dia namelatra ny ozinina ary nitatra kokoa ny refy.
Tamin'ny 2014, Famoronana Mitohy
Shaoxing Juneng New Material Technology Co.LTD.was dia natsangana, ary ny sasany amin'ireo fanodinana ivelany dia nivadika ho fikarohana sy famokarana fampandrosoana tsy miankina, ary nanatsara ny fandraharahana fanondranana, nanjary ny fototry ny oniversite shaoxing.
ln 2017, nahavita zava-bita sasany
Sichuan juneng sivana co. ltd. — vanim-potoana vaovao, fisainana vaovao ary teboka fanombohana vaovao, novakianay ny maroNo.1, ary lasa iray amin'ireo famokarana naterak'ityfiled ity.ary ny orinasanay dia mandroso mankany amin'ny lPO saika.
ln 2018, fampandrosoana maharitra
Fantatr'i Shifeng, Youbang, Guijun, Tai Ji, Xinxiwang ary orinasa hafa, izy ireo dia lasa mpiara-miasa maharitra ary nametraka ny lohanay amin'ny fitaovana sivana notsofina.
Amin'ny taona 2020, mamaky amin'ny ho avy
Izahay dia lasa mpamatsy ny singa mifandraika amin'ny fanafody, ary tafiditra ao anatin'izany ny lisitr'ireo fitaovana lehibe fisorohana ny valanaretina nasionaly, mitarika ny indostrialy mitsonika.
Vokatra mafana - Sitemap - AMP Mobile Saron-tava azo ampiasaina 3ply, Saron-tava fandidiana ambaratonga 3, Saron-tava Ffp3, Saron-tava 3 azo ampiasaina miaraka amin'ny Fda, Saron-tava tsy miendrika 3 Ply, Saron-tava fandidiana 3ply,